Metare Billet Hot Yakagadzira Vira neine induction yekupisa mabhenji
musha / Kunyunyuta Kuumba Moto / Metals Billet Kupisa Kuumba Vira
Metals Billet Hot Kuumba Moto
Categories: Induction Forge Furnace, Kunyunyuta Kuumba Moto Tags: aluminum billet hot forging, aluminium inopisa ichiisa furnace, billet hot forging, Billet Hot Forging Furnace, billet inopisa inging induction furnace, copper billet hot forging, induction billet hot forging, induction hot forging, Metals Billet Hot Kuumba, Metals Billet Hot Kuumba Moto, zvidhina zvinopisa kupisa
Metals Billet Hot Kuumba Moto uye Induction yekupisa kwemhangura / aluminium / iron iron mabhants isati yatanga kupisa
Induction Kutya inowanzoshandiswa mune zvesimbi billet inotengesa mhizha yekupisa billet inofanira kuumbwa mune kupisa. Mune mhizha yekushanda yesimbi, kupisa kwemahofisi kunopisa kunotonhora kunotenderedza 1000 oC-1250 oC maererano nekodhiyo yega carbon uye zvinyorwa zvinyorwa. Iyo inopisa inotanga kushanda inoda kutonhora kwekushisa kwebillet zvakafanana pamwe chete nechepamusoro pechitsiko chechikamu uye nechemberi kwebillet. Kazhinji kupisa kokutanga kwebillet iri muchitonho chemukati uye inofanirwa kupisa pamusoro pekushanda kwekrrystallization yekutsvaira kupisa. Kune nzira dzakasiyana-siyana dzekupisa simbi mukupisa kunopisa kusanganisira kupisa kwekutsvaira, gasi rinotungidzwa nevira, mafuta anopiswa nevira, infrared heater uye magetsi anodzivirira heater. Induction Kutsiva ine zvigaro zvakasiyana-siyana pamusoro peimwe nzira yekupisa inopisa. Chokutanga, kutengesa kupisa maitiro kunokonzera kupisa kwekukurumidza zvakanyanya kunotsanangurwa chikamu chesimbi. Kuwedzeresa, kutengesa kupinza zvirongwa zvinotanga kushandura zvirongwa, sezvo izvi zvisingashandisi kupisa nguva yakafanana nechoto chinopisa. Uyewo, kupisa nguva hakusi kupfupika kune dzimwe nzira. Kuenzaniswa negasi uye mafuta echoto moto, kutarisa nekudzokorora kutonhorera kumwechete kwemazuva akasiyana-siyana zviri nyore kusvika. Automation inogona kushandiswa kune inotungidzirwa kutengesa zvirongwa. Ichatsvaga shoma shopu pasi nzvimbo. Induction Kutya inowedzerawo simba rakawanda uye yakawanda yakasununguka. Ikoko hakuzovi nekukuvadza kunokonzera kupisa kunzvimbo dzakasvibiswa sezvinoitwa mumoto wegesi uye mafuta. Kupfuurirazve mamwe magetsi akafuridzirwa nemafuta anokonzerwa nehurombo hwehupamhi hwepamusoro pamusana pekugadzirwa kwezinga Iko kutengesa kupisa kunopa zvakakaderedza kuderedza kuumbwa kwemaitiro uye decarburization pamhepo yakatsva billet.
Parameter yezvishandiso billet inopisa furna:
Mu induction insimbi billet inopisa kutora furna iyo yose ye bhenti kana slug inopisa. Kazhinji zvikwereti zviduku kana slugs hopper kana ndiro inoshandiswa kuisa mabheti zvakananga kumativi ekuvhara mabheji, zvikwata zvinokonzerwa nemaketani kana mune dzimwe nguva pneumatic pushers. Iko mabheti anobva atungidzirwa kuburikidza neiripi imwe iri shure kweimwe pamvura yakanyoroveswa kana kuti michina yeramami inoshandiswa kuburikidza nebhokisi rinotapudza kukanganisa uye kudzivirira kupfeka. Kureba kwekopi ibasa rekudiwa nguva yakakosha, nguva yekuenderera mberi nechikamu uye urefu hwe billet. Muchikamu chikuru chemuchinjikwa chikamu chebasa hachisi chinhu chisingajairika kuti uine 4 kana 5 makopi mumakwikwi ekupa 5 m (16 ft) yemavilisi kana kupfuura.